A Kwụghachi Ọchịchọ A Chọtere Aka Ụgwọ
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Septemba 1, 2000
GỤỌ NKE Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Portuguese Romanian Setswana Shona Slovak Slovenian Sranantongo Swahili Ukrainian Urdu Zulu
“JEHOVA? Ònye bụ Jehova?” Silvia, bụ́ onye dị afọ asatọ hụrụ aha ahụ n’otu Bible Armenian, bụ́ akụ̀ dị oké ọnụ ahịa nke ezinụlọ nke nwata nwanyị ọzọ gosiri ya. Ọ jụrụ ajụjụ, ma ọ dịghị onye ọ bụla nọ na Yerevan, Armenia, bụ́ ebe o bi, nke pụrụ ịgwa ya onye Jehova bụ—nne na nna ya, ndị nkụzi ya, ọbụnadị ndị ụkọchukwu nọ na chọọchị dị n’ógbè ahụ, enweghị ike ịgwa ya.
Silvia tolitere, gụsịa akwụkwọ, nwetakwa ọrụ, ma ọ mabeghịkwa onye Jehova bụ. O si n’Armenia gbapụ mgbe ọ bụ nwa agbọghọ, mgbe oge ụfọdụ gasịkwara, ọ chọtara onwe ya na Poland, o so ndị ọzọ gbara ọsọ ndụ biri n’otu obere ọnụ ụlọ. Otu n’ime ndị ha na ya bi na-enwe ndị ọbịa mgbe nile. “Ndị ọbịa gị a bụ ole ndị?” ka Silvia jụrụ. “Ha bụ Ndịàmà Jehova, ha bịara ịkụziri m Bible,” bụ azịza o nwetara.
Aṅụrị jupụtara Silvia n’obi mgbe ọ nụrụ aha ahụ bụ́ Jehova. N’ikpeazụ, ọ malitere ịmara onye Jehova bụ na ụdị Chineke ịhụnanya ọ bụ. Otú ọ dị, n’oge na-adịghị anya, ọ hapụrụ Poland. Ọ gara Denmark ịchọ akwụkwọ ikike ibi dị ka onye gbara ọsọ ndụ, n’ofe Oké Osimiri Baltic. O ji nanị ihe onwunwe ole na ole gaa, ma akwụkwọ ndị e ji amụ Bible bụ́ ndị Ndịàmà Jehova bipụtara so n’ime ha. N’azụ otu akwụkwọ, Silvia hụrụ ebe e dekọrọ adres nke alaka ụlọ ọrụ dị iche iche nke Watch Tower Society. Nke ahụ bụ otu n’ime ihe onwunwe kasị mkpa o nwere—ụzọ ya na Jehova si enwe mmekọrịta!
Na Denmark, a kpọgara Silvia n’otu ogige ndị gbara ọsọ ndụ, ọ malitere ịchọ Ndịàmà Jehova ozugbo. Site ná ndekọ adres ndị o nwere, ọ matara na alaka ụlọ ọrụ Watch Tower Society nke Denmark dị n’obodo Holbæk. Ma oleenụ ebe ọ bụ? E ji ụgbọ okporo ígwè buga Silvia n’ogige ọzọ, ka ha na-aga n’ụzọ, ụgbọ okporo ígwè ahụ si na Holbæk gbafee! Ọzọkwa, aṅụrị jupụtara ya n’obi.
N’oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, n’otu ụbọchị anwụ na-achasi ike, Silvia so ụgbọ okporo ígwè ahụ laghachi na Holbæk ma jiri ụkwụ si n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè ahụ gaa n’alaka ụlọ ọrụ ahụ. Ọ na-echeta, sị: “Mgbe m banyere n’ogige ahụ, anọdụrụ m ọdụ n’otu bench ma gwa onwe m, sị, ‘Nke a bụ paradaịs!’” A nabatara ya nke ọma n’alaka ahụ, e mesịakwa o nwetara onye ga na-amụrụ ya Bible.
Ma e si n’otu ogige kpọga ya n’ọzọ ọtụtụ oge. Site n’otu ogige ndị gbara ọsọ ndụ gaa n’ọzọ, Silvia na-achọta Ndịàmà Jehova ma na-amaliteghachikwa ọmụmụ Bible ya n’isi. Ma, mgbe afọ abụọ gasịrị, ọ mụtara ihe zuuru ya iji rara ndụ ya nye Jehova. E mere ya baptism, n’oge na-adịghịkwa anya mgbe nke ahụ gasịrị, ọ banyere n’ozi oge nile. Na 1998, ndị ọchịchị Denmark nyere ya ikike ibi n’obodo ha dị ka onye gbara ọsọ ndụ.
Silvia dị afọ 26 ugbu a, ọ na-ejekwa ozi n’ebe ahụ chetaara ya banyere paradaịs, bụ́ alaka ụlọ ọrụ nke Ndịàmà Jehova dị na Denmark. “Enweghị m ọnụ okwu,” ka ọ na-ekwu ugbu a. “Anọwo m na-achọ Jehova kemgbe m bụ nwata. Achọtawo m ya ugbu a. Enwere m ọchịchọ itinye ndụ m n’ijere ya ozi, leenụ ka m nọzi na Betel. Ana m ekpe ekpere ka ebe a bụrụ ebe obibi m ruo ọtụtụ afọ ndị dị n’ihu!”
Ị̀ Maara Otú E Si Echere Ihe?
Na-egosipụta Ụzọ Iche Echiche Nke Kraịst
Na-egosipụta Àgwà Nke Ichere Ihe!
‘Oge Mweghachi’ Dị Nso!
Ihe Nketa Anyị Dị Oké Ọnụ Ahịa—Gịnị Ka Ọ Pụtara Nye Gị?
‘Ha Na-ekwu Banyere Ịdị Mma Na Ịhụnanya’
Ịgba Mkpụrụ nke Eziokwu Mmiri na Chile
Jehova Na-akwụghachi Ndị Ya Na-eguzosi Ike n’Ihe Ụgwọ Mgbe Nile
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Septemba 1, 2000
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Septemba 1, 2000